Ciidamada Mareykanka oo mooday in Kuuriyada Waqooyi ay "soo weerartay oo kala cararay" - BBC News Somali
Ciidamada Mareykanka oo mooday in Kuuriyada Waqooyi ay "soo weerartay oo kala cararay"
Camp Casey waxaa ku sugan kumannaan askeri oo Ameerikaan ah
Ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhig ku yaalla Kuuriyada Koonfureed ayaa maqlay seeriga degdegga ah ee dagaalka, taas sababtay cabsi ah in Kuuriyada Waqooyi ay weerar soo qaaday weerar.
Wuxuu qorshaha ahaa in askarta la maqashiiyo dhawaq kale, balse seeriga ayaa si lama filaan ah u dhawaaqay.
Afhayeen u hadlay militariga ayaa arrintaan ku tilmaamay "qalad aadane ka dhacay" oo ka dhacay saldhigga Camp Casey, kaas oo si aad ah ugu dhow xuduudda labada Kuuriya.
Kuuriyada Waqooyi ayaa horey ugu hanjabtay in "hadiyadda ciidda masiixiyadda ah" ay u diri doonto ciidamada Mareykanka si ay ugu qasabto in ay ka tanaasulaan arrinta hakadka gelisay wadahaladdii labada dhinac.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump wuxuu diiday in uu xayiraadda ka qaado Kuuriyada Waqooyi.
Sidoo kale, Jimcihii, Idaacadda dowladda Japan ayaa si qalad ah u baahisay in Kuuriyada Waqooyi ay soo riday gantaal ku dhacay xeebaha Japan.
NHK ayaa boggeeda internetka ku muujisay warkaas balse 20 daqiiqo ka dib ayaa la saxay warkaas, raali gelinna waa laga bixiyay. Waxaa boggaas lagu qoray in warkaas uu ahaa "mid tababar ah".
Maxaa ka dhacay saldhigga Camp Casey?
Seeriga colaadda ee sida qaladka ah loo yeeriyay waxaa la sheegay in "uu ruxay" quluubta askarta saldhiggaas ku sugan, qaarkoodan waxaa la arkay iyagoo kala ordaya oo xiran dhammaan qalabkii dagaalka, sida laga soo xigtay bog internet-ka ah oo Wargeyska Washington Post uu soo helay.
Muuqaal la sheegay in la duubay xilligaas ayaa la soo geliyay barta Twitter-ka ee caanka ay ku yihiin ciidamada Mareykanka.
Afhayeen, Lt Col Martyn Crighton wuxuu sheegay in uusan caddeyn karin in muuqaalkaas uu yahay dhacdadii ugu dambeysay.
Dhawaq loogu baaqo askarta oo galab kasta laga daaro saldhigyada ciidamada Mareykanka ayaa la doonayay in la taabto, ayuu yiri.
Askarta ayaa si degdeg ah loogu wargeliyay in qalad uu u dhawaaqay seeriga, ayuu yiri Lt Col Crighton.
Saldhiggan ciidan ee istiraatiijiga ah wuxuu ku yaallaa meel u dhow magaalada Dongducheon ee Kuuriyada Koonfureed. Waa goobt laga ilaaliyo caasimadda dalka ee Seoul. Wuxuuna saldhig u yahay kumannaan askar Ameerikaan ah.
Maxay xiisadda Gacanka Kuuriya u sii siyaadeysaa?
Horraantii bishan December, Ku xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi, Ri Thae Song, wuxuu muujiyay in dalkiisa uu soo celinayo tijaabada madaafiicda ridada dheer, haddii Washington ay diido in ay wax ka badasho kaalinteeda wadahadallada.
Waa "arrin u taalla Mareykanka, nooca hadiyad ee uu doonayo xilliga ciida Masiixiyadda", ayuu sheegay.
Wakiilka Gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi, Stephen Biegun, wuxuu meesha ka saaray wakhtigaas ay Pyongyang u qabatay, wuxuuna tilmaamay in Washington ay diyaar u tahay in wadahadallada ay dib u bilowdaan.
Trump oo casuumaad ka helay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi
Kuuriyada Waqooyi waxay sameysay tijaabooyiin dhanka dayax-gacmeedyada ah, si ay sare ugu qaado awoodeeda nukliyeerka, sida warbaahinta dalkaas ay qortay.
Bishii la soo dhaafay, Japan waxay dhalleeceysay Pyongyang oo "si joogto ah u tijabineysay madaafiicda caagga ah". Xilligaas laba xabo ayey hawada u dirtay.
Si kastaba, dowladda Kim Jong-un waxay sheegtay in ay "tijabineysay madaafiic waaweyn oo dhowr madax oo sun ah qaadi kara", waxayna ku hanjabtay in "Japan ay suuragal thay in ay aragto madfac dhab ah, mustaqbalka dhow".
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump wuxuu sheegay in weli uu rajeynayo in heshiis uu la galo Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha wuxuu sameeyay hab diblumasiyadeed oo Kuuriyada Waqooyi xudun uga dhigaya siyaasaddiisa arrimaha dibadda ee sannadkii 2018-kii, balse in la isu tanaasulo ayaa fashilantay in kastoo labadii kullan ee Trump iyo Kim ay xoogaa waddada u xaareen kuuriyada Waqooyi.
Trump iyo Kim oo ku kulmay soohdinta hubka ka caaggan ee u dhexaysa labada Kuuriya
30 Juunyo 2019
Salaantii taariikhda gashay ee Trump iyo Kim
Madaxda caalamka oo soo dhaweeysay wadahadal ay yeeshaan Trump Kim Jong un